Xildhibaan Mahad Salaad oo ka jawaabayay hadalkii galabta uu jeediyay Fiqi ayaa yiri. | Dayniile.com
Home Warkii Xildhibaan Mahad Salaad oo ka jawaabayay hadalkii galabta uu jeediyay Fiqi ayaa...
Xildhibaan Mahad Salaad oo ka jawaabayay hadalkii galabta uu jeediyay Fiqi ayaa yiri.
Waxa jiray nin oday ah oo mingiska ka tumi jiray deegaanada Galmudug, lana dhihi jiray Dalays oo Cayr ahaa. Waxa xarun u ahaan jirtay meel LACASO la yiraahdo oo Gadoon agteeda ah. Lacoso-na habeenka marka la gaaro nalal ayaa ka shidma, durbaan cid garaacaysa aan la aqoona waa ka yeeraa. Marka waxa la yiraahdo jinka ayay hoy ama guri u tahay.
Wuxuu rabaa marka inuu sheego in Jinkii soo guuray isagana soo raacay. Berin ayuu inta xaarxaartay oo durbaankiisii la soo baxay ayuu ku dhuftay hees uu rabo dadka inuu ku hogga tusaaleeyo in jinigii soo guuray hadana safar ku marayo dhulka Ayaanluhu deganyahay. Marka wuxu yiri:
Abtigey Fiqi waxaan leeyahay durbaanka aad tumeyso waan fahamsanahay Abtiyow ee Ilaahey haku soo nabad aruursho!
Previous articleWasiirkii Hore Amniga Galmudug oo weerar Afkaa ku qaaday madaxweybe Qoor Qoor
Next articleXildhibaan Fiqi Cajaa”ibta aan ku arkay shirkiisa Jaraa”id
Laga bilaabo 11 bishaan aynu ku jirno ee October ayaa waxaa UK liiska gaduudan ama casaanka ah ee Karoona virus ay ka saaraysaa dadka...
Gudoomiyihii hore ee Gobolka Gedo Ciidamo uu Wato oo xoog ku...
Doorashada Lix kamid ah kuraasta Aqalka Sare ee Gobolada Waqooyi oo...